United States na-ekwupụta ọnọdụ mberede n'ihi oke ifufe | Netwọk Mgbasa Ozi
United States kwupụtara ọnọdụ nke ọnọdụ mberede n'ihi oke ifufe ahụ
United States etinye aka na oke oke mmiri nke mere ka a kpọọ ọnọdụ mberede na ọtụtụ ebe dịka New York na Long Island. Oké ifufe dị ike nke a na-edebanye aha na-ebute ọtụtụ mmebi, ebe ọ bụ na ọ bụghị oke mmiri ozuzo snow, kama a na-agbakwunye ifufe dị elu na ya, na -emepụta ọnọdụ ndị siri ike.
Gịnị bụ ọnọdụ dị ná mba ndị a?
1 New York na Long Island na ọnọdụ mberede
2 Mmebi metro na ọdụ ụgbọ elu
3 Ọtụtụ snow
New York na Long Island na ọnọdụ mberede
N'iburu oke mmiri ozuzo edebara aha n'isi ụtụtụ a, ekpebiela ikwupụta ọnọdụ mberede na New York na Long Island. Ọnọdụ mberede a na-emetụta mpaghara ndịda niile ma na-enye ndị ọchịchị ikike Ha nwere ike ịme mkpebi nke dị mkpa karịa nke ọchịchị obodo.
Mgbe oke mmiri ozuzo dị ka nke a wakporo mpaghara, ọnọdụ mberede na-enye steeti ikike pụrụ iche iji lụso oke ifufe ahụ agha, na-enweghị mkpa ịbanye na nkwado nke ndị omebe iwu yana ibute ihe onwunwe ma ọ bụ akụrụngwa dị mkpa maka ọnọdụ mberede nke ihu igwe.
Mmebi metro na ọdụ ụgbọ elu
Maka ugbu a, emeghị atụmatụ ịkwụsị ọrụ nke ụzọ ụgbọ oloko dị na New York City, ebe ha na-eji ya kwa ụbọchị nde mmadụ na ị gaghị eme na-enweghị ihe enyemaka a. N'aka nke ọzọ, mmachi amachibidoro nnukwu ụgbọ ala n'okporo ụzọ na okporo ụzọ nwere ike imetụta okporo ụzọ n'okporo ụzọ steeti.
N'ihi snow nke na-agbakọta n'okporo ụzọ na ifufe siri ike, a na-egbu oge na njem nke ụgbọ ala.
Banyere ọdụ ụgbọelu, abụọ ndị New York City akwụsịtụla ụgbọ elu ha n'ihi oke mmiri ozuzo ahụ n'ihi ihe ize ndụ nke njem. A kwụsịrị ụgbọ elu niile n'ihi oke ifufe na snow. Fgbọ elu JFK zipụrụ ozi site na netwọk mmekọrịta Twitter, na-arịọ ndị njem ka ha kpọtụrụ ndị ụgbọ elu kwekọrọ na ịhazigharị ụgbọ elu ha. N'oge na-adịghị anya, ọdụ ụgbọ elu La Guardia kọrọ na o mekwara otu ihe ahụ.
Na ngụkọta A kagbuola ụgbọ elu 483 na ọdụ ụgbọ elu JFK na 639 na La Guardia.
Ifufe kachasị ike a na-atụ anya taa bụ n’agbata kilomita iri anọ na iri ise na isii n’otu awa na gusts nke ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100. snow malitere ịda n'oge oge mbụ na mpaghara Long Island na New Jersey ma na-emetụta Manhattan n'oge awa mberede ebe njem na-amalite.
N'obodo ndị dị ka ndị a ebe ọtụtụ narị nde mmadụ bi, oké ifufe nke ụdị a bụ ihe jọgburu onwe ya maka ikesa ụgbọ ala, ọrụ sistemụ ndị uwe ojii, ọdụ ụgbọelu, njem ọha na eze, wdg.
Ọzọkwa, a na-atụ anya ka ha daa ụbọchị niile ihe karịrị otu ụkwụ nke snow na Long Island na ụsọ mmiri New Jersey, na ọkara na Manhattan.
Mpaghara ebe oke mmiri ozuzo a kacha emetụta bụ na Suffolk County na Long Island. Ekewawo oke ikuku a dị ka "oke egwu".
Na New York ha kwụsịkwara klaasị n'ụlọ akwụkwọ n'ihi ihe ize ndụ dị na ya site n'iji ụmụ akwụkwọ gaa ụlọ akwụkwọ. A kagbuola ihe omume ọ bụla chọrọ ịrị elu nke ndị mmadụ na iji ụgbọ ala maka ụbọchị ndị a.
Na New York, a tụrụ anya ya taa obere okpomọkụ nke -4 ogo Celsius, nwere mmetụta nke okpomoku nke -13 ogo n'ihi ikuku ikuku, ọ bụ ezie na Fraịde na Satọdee a na-atụ anya ọdịda dị elu na ọnọdụ okpomọkụ.
Ihe ize ndụ nke mgbasa na-aghọ ihe a na-ahụ anya mgbe ọ na-enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla na obere mita ole na ole. Mmetụta dị nnọọ ka nke ahụ ikuku na-agba na ụgbọala.
Hicgbọ ala ndị e liri n'okpuru snow, obere ụmụaka nwere obi ike na-egwuri egwu na ya, ụlọ ndị kpuchiri ekpuchi, oyi na-ekpo ọkụ na ọtụtụ ikuku, bụ panorama dị na New York n'oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » United States kwupụtara ọnọdụ nke ọnọdụ mberede n'ihi oke ifufe ahụ
Nke a bụ otú ihu igwe ga-adị na Balearic Islands na 2038